Tatoazy yoga, lisitra iray feno aingam-panahy | Ny fanaovana tatoazy
Tatoazy yoga, lisitra feno ho an'ny aingam-panahy
ny tombokavatsa ny yoga mitady aingam-panahy amin'ny iray amin'ireo taranja (na ara-batana na ara-tsaina) malaza indrindra.
Amin'ity lahatsoratra ity dia nanomana zavatra feno izahay tanisao miaraka amina marika marobe izay afaka maneho ny fitiavanao yogi ary mety amin'ny ho avy tombokavatsa. Mamaky hatrany hahalala azy ireo!
1 Ny om, izay midika telo na telo
2 Ny mandala, ny tanteraka sy ny fifantohana
3 Namaste, fiarahabana feno fanajana
4 Ny voninkazo lotus, fahazavana
5 Buddha, andriana mahantra
6 Ganesha, ilay elefanta hendry
Ny om, izay midika telo na telo
Hanombohana, ny marika yogi tandindona ny hatsarana, ny om, misolo tena an'i Brahma, Vishnu ary Shiva, amin'ireo fanjakana fahatsiarovan-tena telo. Izy io dia maneho yogi ao amin'ny fiota-boninkazo lotus manonona ity tandindona ity, izay ny fanononana azy dia tena mitovy amin'ny "aum" (Araka ny hitanao, feon'ny litera telo izay manaraka miaraka amin'ny fanehoana ny trinite om).
Amin'ny tatoazy dia azo ampiarahina tsara amin'ireo marika hafa (toy ny voninkazo lota, Bouddha ...), satria izy io irery no very ny maha-izy azy.
Ny mandala, ny tanteraka sy ny fifantohana
Iray amin'ireo marika famantarana malaza indrindra amin'ny tatoazy yoga, izay efa noresahintsika imbetsaka tao amin'ny bilaogy, ny mandala. Izy ireo dia fanampiana lehibe hifantoka mandritra ny fisaintsainana ary koa maneho ny fahalavorariana an'izao rehetra izao.
Toy ny tamin'ny om, toy ny tatoazy dia hita kely izany. Ny zavatra tsara dia satria be dia be izy io (amin'ny endrika endrika sy fomba: loko, mainty sy fotsy, tsotra, be pitsiny…) ka tsy dia maninona, satria ny endriny tsirairay dia mety ho tokana.
Namaste, fiarahabana feno fanajana
Na dia ny namaste malaza aza (izay amin'ireto faritra ireto, ho fanampin'ny efitrano yoga, dia hitantsika ihany koa tamin'ny andiany toa VERY) tsy natokana ho an'ny yaisy, tsy isalasalana fa ny fiarahabana izay misolo tena azy ireo indrindra. Io dia ampiasaina indrindra alohan'ny sy aorian'ny fotoam-pianarana ho endrika fanajana. Ho fanampin'ny fanononana ny teny, mba hanaovana ny fiarahabana namaste dia tokony hitondranao ny felatananao eo ambanin'ny saokanao ary hiankohoka kely ny lohanao.
Amin'ny maha-tatoazy azy dia mety hiasa tena tsara amin'ny endriny tena tsotra, eo am-pelatanana, ohatra, amin'ny teny sanskrit ary miaraka amina motif kely toa voninkazo lotus aza.
Ny voninkazo lotus, fahazavana
Ny iray amin'ireo tombokavatsa be mpampiasa indrindra ho an'ny yaisy (nahazo alalana avy amin'ny mandala) dia ny an'ny voninkazo lotus, satria ny dikany dia misy fiovana kely arakaraka ny karazam-boninkazo, ny fanokafana ny felany sy ny lokony. Amin'ny ankapobeny, ny voninkazo lotus dia tandindon'ny fahazavana sy ny fitomboana, satria ny yogi dia mahatratra azy, toy ny voninkazo, izay maniry ao anaty rano feno fotaka, amin'ny alàlan'ny fitomboana sy ny fahalalana.
Araka ny efa nolazainay tatoazy tena miovaova izy io. Ho fanampin'izay efa noresahintsika tetsy ambony dia mandeha lavitra ihany koa ny endrika ankapobeny. Ohatra, izy io dia mety ho antony manosika ilay sombin-javatra na miaraka amin'ny hafa, manana fomba tena azo raisina na tsy azo raisina ...
Buddha, andriana mahantra
Fantatry ny rehetra ny Buddha, antony iray hafa ahazoana aingam-panahy avy amin'ny tatoazy yoga. Ity printsy tamin'ny taonjato faha-XNUMX talohan'i Kristy ity dia nandao ny fiainana manankarena sy harena mba hahazoany fahazavana amin'ny lalana tsotra sy mahantra, manampy ny hafa Na dia misy ifandraisany amin'ity fahazavana ity aza dia miova kely ny dikany indraindray noho ny fihetsika na ny endriny.
Toy ny tatoazy, miasa tsara toy ny endrika nofosain'ny iray amin'ireo sarivongana sy tarehimarika marobe. Araho miaraka amina voninkazo lotus hanamafisana ny lalan'ny fahazavana.
Ganesha, ilay elefanta hendry
Ganesha dia iray amin'ireo andriamanitra malaza indrindra amin'ny fivavahan'ny Hindoa. Manana lohan'ny elefanta izy io ary matetika no voaravaka firavaka manankarena (sy volomaso masin'Andriamanitra). Mampiseho ny vatana sy ny fanahy izy io, fa koa fahendrena, fahalalana ary fahamalinana.
Amin'ny tatoazy, ho fanampin'ny endrika lehibe miaraka amina endrika tsy dia misy loatra, koa toa tsara amin'ny fomba hafa, na ny sasany aza raha ny fahitana azy dia mety ho toa tafahoatra, toa ny sarimiaina ary miloko.
Manantena izahay fa ireo marika tatoazy yoga ireo dia nanome aingam-panahy anao. Lazao aminay, manana tombokavatsa entin'ity fitsipi-pifehezana ity ve ianao? Inona no antony nofidinao? Tsarovy fa azonao atao ny milaza aminay ny zavatra tadiavinao amin'ireo hevitra ireo!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Karazana tombokavatsa » Tattoo atsinanana » Tatoazy yoga, lisitra feno ho an'ny aingam-panahy
Tatoazy zavaboary mythological
Tatoazy boribory enso japoney, dikany ary hevitra